Fiparitahan'ny tsimok'aretina covid-19 :: Nahitana marary fitopolo mahery tao anatin’ny roa andro • AoRaha
Fiparitahan’ny tsimok’aretina covid-19 Nahitana marary fitopolo mahery tao anatin’ny roa andro
Mihoapampana ny tarehimarika. Olona sivy amby fitopolo no voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina « Covid-19 » tao anatin’ny roa andro monja. Ny dimy amby efapolo notaterin’ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra teny ofisialin’ny tarehimarika momba ny coronavirus, afak’omaly. Ny efatra amby telopolo kosa vao nampahafantarina, omaly nandritra ny fandaharana manokana isaky ny tolakandro amin’ny onjam-peo sy fahitalavitra.
« Tafakatra dimy sy efajato ny olona voan’ny coronavirus eto Madagasikara. Roa amby fitopolo sy roanjato no marary manaraka fitsaboana, amin’izao fotoana izao. Iraika amby telopolo amby zato kosa no efa sitrana. Misy olona iray marary mafy any Toamasina ankehitriny (Ndrl: omaly). Roa no matin’ny Covid-19, hatreto », araka ny tatitra, omaly.
Mitombo hatrany ireo tranga vaovao anyToamasina. Tafakatra enina amby enimpolo ireo olona nifindran’ny tsimok’aretina « Covid-19 », any an-toerana. Folo ny tany Moramanga ary telo teto Antananarivo.
Fitiliana Mandeha tsikelikely ny fitiliana hatao any amin’ireo faritra nahitana an’ireo tranga vaovao ireo. Manao ny anjara fitiliana ny laboratoara Charles Mérieux, eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo Ankatso sy ny laboratoara mitety vohitra any Toamasina, ankoatra ny hataon’ny Institut Pasteur de Madagasikara. Sivy amby roapolo sy dimanjato ny fitambaran’ny fitiliana nahitana an’ireo marary vaovaon’ny coronavirus ireo.
Fandaminana tsena :: Mangataka andro iray ireo mpivarotra eny amin’ny Coum 67Ha